Weriyeyaasha Somalia oo cambaareeyay in Visayaal leh magacooda suuqyada laga iibsado.
Monday July 05, 2010 - 05:22:21 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Mogadishu 20 July 2009
Ururka isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ ayaa si kulul u cambaareeyay dhacdadii uu ku kacay ninka sheegta inuu ka madax yahay NUSOJ ee lagu magacaabo Omar Faruk.
" Waa nasiib daro taariikhiya hab dhaqanka guracan ee ninka la yiraa Omar Faruk,waxaa wax lala yaabaa inuu Magacyadda Weriyeyaasha Soomaaliyeed ku qaato Visayaal,ugana qaatay Safaaradda Talyaniga ee Magaaladda Nairobi,kadibna suuqyada ka iibsaday"ayuu yiri Gudoomiyaha Associated Somali Journalists,Dahir Abdulle Alasow.
Dahir Alasow wuxuu tilmaamay in Omar Faruk ka masuul yahay dilalka,Barakicinta Weriyeyaasha Somalia,gaar ahaan dilkii Agaasimahii Idaacadda Shabelle.
"Omar Faruk waxaanu ognahay inuu lacag badan ku bixiyo barakicinta iyo dilalka Weriyeyaasha,waxaa la wada ogyahay dadka uu adeegsado,wuxuuna arrimahaas oo dhan u sameeynayaa sidii uu dhaqaale uga dul sameeyn lahaa,oo aduunka ugu tuugsan lahaa in Weriyeyaasha dhibaateeysan yihiin"ayuu yiri Dahir Abdulle Alasow.
Mr Alasow wuxuu sheegay in Saxaafadda Somalia u baahan tahay gurmad deg dega,waxaana uu farta ku fiiqay in gurmadkaas uu ugu horeeyo sidii looga qaban lahaa Omar Faruk.
"Beesha Caalamka iyo Hay'adaha Saxaafadda aduunka,waxaanu leenahay,anagu ka mid maahin kooxaha gacanta idiin hoorsado,waxaanu nahay Weriyeyaasha Xirfadlayaasha Somalia ee la yaqaan,fadlan naga joojiya lacagaha aad siineeysaan qoowleeysatada ee nagula waxyeeleeynaa maalin walba,fadlan baaris ku sameeya dilkii Mukhtaar Mohamed Hiraabe iyo 12 Visa ee Safaaradda Talyaniga uu Omar Faruk ka qaaday kana iibsaday Somalida Nairobi"ayuu ku celcelshay Dahir Alasow.
Saxaafadda Somalia oo sedexdii sano ugu dambeysay gashay curaar iyo tacadiyo,waxay noqotay mid aan loo damqan.
By: Mahammed Cumar